အဆိုပါ Park မှာငါးမန်း | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အဆိုပါ Park မှာငါးမန်း
အဆိုပါပန်းခြံ APK ကိုအတွက်ငါးမန်း
အဆိုပါ Park မှာငါးမန်းလေးတွေများအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာ geospatial တိုးပွား Reality ဂိမ်း Geo AR အားကစားပြိုင်ပွဲ '' alpha လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ပထဝီ AR အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်အိပ်ရာနှင့်တက်ကြွအပြင်ဘက်ကိုချွတ်လေးတွေရရှိသွားတဲ့ကြောင့်စွဲငြိဖွယ်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာဖန်တီးဖို့ရောနှောထားသော Reality ကို Motion ဂိမ်းကိုသုံးနေသည်!
က GPS စနစ်ပေါ်တွင်မူတည်နှင့်သင့် device ကိုမိုဃ်းကောင်းကင်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အမြင်ရှိရမည်အဖြစ် Park မှာငါးမန်း, ပြင်ပမှာကစားရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကကြီးမားသော, ပြားချပ်ချပ်ပန်းခြံဒါမှမဟုတ်ကစားနည်းများကိုလယ်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုအစာကျွေးခြင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာမွမ်းမံလေ၏သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ပြသပါလိမ့်မည်သည့်ရေအောက်ကမ္ဘာကမှတဆင့်စွန့်စားမှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးပွား Reality နည်းပညာကိုသင်ရွှေ့နေစဉ်သင်အမှန်တကယ်တစ်ခုရေအောက်ကမ္ဘာကမှတဆင့်လမ်းလျှောက်နေကြသည်သော်လည်းအဖြစ်ခံစားခွင့်ပြု! အဆိုပါကိရိယာမှ GPS စနစ်ကိုသြဒီနိတ်နှင့်အာရုံခံကိရိယာအချက်အလက်သည်သင်၏လှုပ်ရှားမှု detect လုပ်ဖို့အသုံးပြုကြသည် - ထိုပိုမြန်သငျသညျကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌ကို run ခြင်း, ပိုမိုမြန်ဆန်သင်ကစားပွဲကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရွှေ့မည်!
သငျသညျငါးကျောင်းများမှပိုမိုနီးကပ်စွာရသကဲ့သို့, ပတ်ပတ်လည်ကိုသင်အတိုင်းလိုက်နာရန်စတင်ပါလိမ့်မယ် - ဒါပေမယ့်ငါးမန်းသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်! သင်တစ်ဦးငါးမန်းနီးကပ်လွန်းရဖို့ခွင့်ပြုပါကအားလုံးသင့်ရဲ့ငါးမိတ်ဆွေများကိုကွာတွှေပါလိမ့်မယ်။
သင့်ဒေသခံပန်းခြံအားလုံးကို - သင်နီးကပ်နှင့် Triceratops, Brontosaurus ကို T-Rex နှင့်ပိုပြီးဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတက်ရနိုငျတဲ့သမိုင်းမကမ္ဘာကြီး - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Dino မြေရှာဖွေစူးစမ်းပျော်စရာရှိသည်! သို့သော် squashed ရဖို့သတိထားပါဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒိုင်နိုဆောအားလုံးဘဝ-size ကိုအချိုးအစားဖို့လုပ်ပါတယ်, သူတို့သည် BIG ခဲ့ကြသည်နေကြသည်။
ကျနော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးပြည့်စုံရောနှောထားသော Reality ကို Motion Game ကဂိမ်းကိုတည်ဆောက်လုပ်ကိုင်နေကြသည် - ဤသာရုံက start ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်တတ်နိုင်သမျှပျော်စရာအဖြစ် geospatial တိုးပွား Reality အတွေ့အကြုံများအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးကူညီရန်စမ်းသပ်သူများနှင့်တုံ့ပြန်ချက်ရှာကြ၏။
Kickstarter နေဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ဗားရှင်းအသစ်၏ teaser!
- နယူးမိတ်ဆက်ခြင်းကို sequence ကို, ဆက်တင်များ menu ကိုနှင့်ပိုပြီး!
93.13 ကို MB